Wararka Maanta: Jimco, Sept 13, 2013-Ururka Xallinta khilaafaadka XAQSOOR oo ku howlan xal u hielidda khilaaf ka dhexeeya Beelo wada dega Xuddun (SAWIRRO)
Jimco, September 13, 2013 (HOL) — Ururka xallinta iyo ka-hortaga khilaafka ee lagu magcaabo XAQSOOR ayaa bilaabay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen xallinta khilaaf u dhexeeya laba beelood oo wada-dega degmada Xuddun ee gobolka Sool.
Cali Axmed Cali oo ka mid ah mas’uuliyiinta XAQSOOR oo kulan waxgaradka labada beelood kula qaatay magaalada Laascaanood, ayaa sheegay in ay ka qaybqaadan doonaan sidii loo dhameyn lahaa khilaafaadka ladadaas beelood ee walaalaha ah u dhexeeya.
Khilaafkan oo taagnaa saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ayaa ka billowday markii nin hubaysani uu duleedka degmada Xuddun ku dilay nin kale, kaas oo beeshiisu ay soo qabteen, balse ilaa haatan aan wax xal ah loo helin.
Waxgaradka degmada Xuddun iyo magaalada Laascaanood ayaa isku dayay dhex-dhexaadinta labadaas boolood, iyagoo dhowr jeer oo horana ku guul daraystay in arrintan xal laga gaaro.
Lama saadaalin karo halka ay arrintani sal dhigan doonto; balse inta badan waxaa la isku halleynayaa gacan ku hayta dambiilayaashii oo ku xiran xabsiga Laascaanood.